बैंकहरुको लोन ग्रोथ: रकममा एनआइसी एशिया र प्रतिशतमा एनबी फस्ट, इन्भेष्टमेन्ट र प्राइम लास्ट « Clickmandu
प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १३:२७
काठमाडौं । आक्रमक बजार विस्तारमा गरिरहेको एनआइसी एशिया बैंकले धेरैवटा सूचकमा नम्बर वान हुन सफल भएको छ । पूराना, ठूला बैंक र एलिट बैंकलाई उछिन्दै एनआइसी एशिया बैंक पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा बैंकले अगत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा बैंकले १४५ प्रतिशले नाफा बढाएको छ ।
लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि प्रतिफल दिनेमा यो बैंक ०७५ पुस मसान्तदेखि नै पहिलो नम्बरमा परेको छ । यो अवधिमा बैंकले बिजनेश पनि राम्रै गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा रकमका आधारमा यो बैंकले सबैभन्दा धेरै निक्षेप र कर्जा बढाएको छ । २९ अर्ब ६७ करोड ५४ लाख रुपैयाँले निक्षेप बढाएर कूल निक्षेप १ खर्ब ८० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । बैंकले कर्जा पनि २९ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बढाएर कूल कर्जा १ खर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
९ महिनाको अवधिमा बैंकले बढाएको निक्षेप १९.२६ प्रतिशतले हो भने कर्जा २४.१० प्रतिशतले धेरै हो । निक्षेप र कर्जा वृद्धिको प्रतिशतका आधारमा मात्रै अरु केही बैंकले एनआइसी एशियालाई उछिनेका छन् ।
यो ९ महिनाको अवधिमा कर्जा बढाउने बैंकहरुको सूचिमा सेकेन्ड लास्ट छ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक । यो बैंकले जम्मा ६.०७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३३ करोड १० लाख रुपैयाँले बढाएर ०७५ चैत मसान्तमा कूल कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यो अवधिमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जम्मा ३.२० प्रतिशतले अर्थात् ४ अर्ब ४९ करोढ १९ लाख रुपैयाँले मात्रै निक्षेप बढाएको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकको नाफा १० प्रतिशतले घटेको छ भने खराब कर्जा ३०० प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै कर्जा बढाउने बैंक हो एनबी । यो बैंकले ९ महिनाको अवधिमा २६.०१ प्रतिशतले कर्जा बढाएको छ । ०७५ असार मसान्तको तुलनामा ०७५ चैत मसान्तमा १० अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढाएर कूल कर्जा ५३ अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । तर, यो बैंकले निक्षेप भने १६.६७ प्रतिशतले मात्रै बढाएको छ ।
नाफाको वृद्धिदरः एनआइसी एशियाको चमत्कार, नविल कमजोर, इन्भेष्टमेन्टको घट्यो, कुन बैंकको कति ?
बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको बैंक पनि कर्जा विस्तारमा आक्रमक भएको हो । पछिल्लो समय यो बैंकले स्प्रेड दर पनि बढाउँदै लगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा बैंकले ५५ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ ।
प्रतिशतका आधारमा मेगा बैंक तेस्रो धेरै कर्जा बढाउने बैंक बनेको छ । ९ महिनको अवधिमा यो बैंकले २२.५४ प्रतिश अर्थात् १२ अर्ब ८७ करोड ६६ लाख रुपैयाँले बढाएर ०७५ चैत मसान्तसम्मा कूल कर्जा ६६ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यो अवधिमा बैंकले १९.४३ प्रतिशतले बढाएको छ भने एक वर्षको अवधिमा बैंकले १३१ प्रतिशतले बढाएको छ ।
स्टाफ मिटिङमा NIC Asia को उदाहरण दिँदै इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओको निर्देशन- एग्रेसिभ हुनुहोस्
रकमका आधारमा चौथो र प्रतिशत दुबैका आधारमा तेस्रो बढी कर्जा बढाउनेमा एभरेष्ट बैंक छ । यो बैंकले ९ महिनाको अवधिमा २१.५९ प्रतिशतले अर्थात् १९ अर्ब ३४ करोड ७६ करोडले बढाएर ०७५ चैत मसान्तमा कूल १ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेको छ । यो अवधिमा बैंकले १६.९५ प्रतिशतले बढाएको छ भने ०७४ चैत मसान्तको भन्दा ०७५ चैत मसान्तमा १८ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ ।
त्यस्तै, यो ९ महिनाको अवधिम सिद्दार्थ बैंकले पनि २१.४६ प्रतिशतले अर्थात् १८ अर्ब ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँले बढाएर ०७५ चैत मसान्तसमा कूल कर्जा १ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यो अवधिमा बैंकले निक्षेप भने १२ अर्ब ७८ करोड २३ लाख अर्थात् १२.५३ प्रतिशतले मात्रै बढाएको थियो । एक वर्षको अवधिको नाफा भने बैंकले १५ प्रतिशतले बढाएको छ ।
९ महिनाको अवधिमा रकम र प्रतिशत दुबैका आधारमा कर्जा बढाउने बैंकको सूचिमा अन्तिम नम्बरमा छ प्राइम बैंक । यो बैंकले ९ महिनाको अवधिमा ४.१५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँले बढाएर ०७५ चैत मसान्तमा कूल कर्जा ७२ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यो अवधिमा बैंकको निक्षेप ६.७३ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले घटेको थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकको नाफा भने ३१ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसैगरी, यो ९ महिनाको अवधिमा माछापुच्छ्रे, सेञ्चुरी र नेपाल एसबिआई बैंकले कर्जा २० प्रतिशतले बढाएका छन् । यी बैंकले क्रमशः २२, २०.५० र १७.१० प्रतिशतले बढाएका थिए ।
नविल, इन्भेष्टमेन्ट र एभरेष्टसहित १३ बैंकको ‘आरओई’ घट्यो, प्रभुको छलाङ, कुन बैंकको के भयो ? (सूचिसहित)
यो ९ महिनाको अवधिमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र प्रभु बैंकले १८ प्रतिशतले कर्जा बढाएका छन् । यो अवधिमा निक्षेप भने क्रमशः १६.८६ र १०.४७ प्रतिशतले बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा चार्टर्डले १२ प्रतिशतले र प्रभुले ५८ प्रतिशतले नाफा बढाएका छन् ।
त्यसैगरी, यो अवधिमा सिभिल, सिटिजन्स र कृषि विकास बैंकको कर्जा १० प्रतिशतभन्दा कमले बढेको छ । क्रमशः ७.४०, ९.९४ र ९.८० प्रतिशतले कर्जा बढेको हो ।
Ashad 075 Chaitra 075 Growth (9 months)
Chaitra 075 Over Ashad 075
Row Labels Loan and Advances to BFIs Loan and Advances to Customers Total Loans and Advances Loan and Advances to BFIs Loan and Advances to Customers Total Loans and Advances Amount Rank Percentage
Agriculture Development 495,000 100,030,112 100,525,112 495,000 109,883,911 110,378,911 9,853,799 20 9.80%
Bank of Kathmandu 1,831,831 65,789,082 67,620,914 3,046,504 71,261,504 74,308,007 6,687,093 24 9.89%
Century Bank 1,462,029 47,944,435 49,406,464 2,035,614 57,399,364 59,434,978 10,028,514 18 20.30%
Citizens Bank 1,420,646 55,601,767 57,022,413 1,664,883 61,025,291 62,690,174 5,667,762 26 9.94%
Civil Bank 1,868,150 38,254,794 40,122,944 1,679,461 41,412,029 43,091,490 2,968,546 27 7.40%
Everest Bank 3,879,042 85,738,443 89,617,485 6,643,671 102,321,468 108,965,139 19,347,654421.59%
Global IME 3,474,259 88,878,096 92,352,355 3,887,821 103,169,706 107,057,527 14,705,172 8 15.92%
Himalayan Bank 3,685,219 82,474,994 86,160,213 4,082,588 93,775,357 97,857,944 11,697,731 15 13.58%
Janata Bank 1,276,183 52,791,716 54,067,899 1,453,228 64,701,087 66,154,316 12,086,417 13 22.35%
Kumari Bank 1,778,935 60,596,576 62,375,510 2,640,603 69,598,802 72,239,404 9,863,894 19 15.81%
Laxmi Bank 1,656,125 59,834,775 61,490,900 1,855,563 70,515,740 72,371,303 10,880,403 17 17.69%
Machhapuchchre 1,798,388 62,417,218 64,215,605 2,321,092 74,984,076 77,305,168 13,089,563 10 20.38%
Mega Bank 1,591,787 55,528,642 57,120,429 2,410,590 67,586,507 69,997,097 12,876,667 12 22.54%
Nabil Bank 4,565,790 109,059,365 113,625,155 5,557,963 128,197,344 133,755,307 20,130,152217.72%
NCC Bank 1,881,003 51,452,966 53,333,969 2,244,685 56,807,905 59,052,590 5,718,621 25 10.72%
Nepal Bangladesh 1,380,569 40,878,524 42,259,092 1,730,705 51,521,378 53,252,083 10,992,991 16 26.01%
Nepal Bank 2,739,471 75,556,511 78,295,981 3,147,418 88,191,221 91,338,638 13,042,657 11 16.66%
Nepal Investment 2,502,926 118,322,570 120,825,496 4,127,829 124,028,747 128,156,576 7,331,080 23 6.07%
Nepal SBI 2,872,202 72,363,660 75,235,862 4,963,655 85,794,388 90,758,043 15,522,181620.63%
NIC Asia 4,658,145 115,804,621 120,462,766 7,941,800 141,555,895 149,497,694 29,034,928 1 24.10%
NMB Bank 2,497,568 72,711,772 75,209,340 3,371,826 87,024,524 90,396,350 15,187,010720.19%
Prabhu Bank 3,181,809 72,990,232 76,172,041 3,767,263 86,169,497 89,936,760 13,764,720918.07%
Prime Bank 2,829,040 67,137,816 69,966,856 3,004,701 69,863,986 72,868,687 2,901,831 28 4.15%
Rastriya Banijya Bank 4,045,981 117,414,163 121,460,144 4,210,470 137,029,451 141,239,921 19,779,777316.28%
Sanima Bank 1,645,223 67,598,134 69,243,357 1,890,775 79,135,778 81,026,553 11,783,196 14 17.02%
Siddhartha Bank 2,841,166 83,236,088 86,077,254 3,167,325 101,383,639 104,550,964 18,473,710521.46%
Standard Chartered 1,900,011 45,175,438 47,075,449 2,307,967 53,462,305 55,770,272 8,694,823 22 18.47%
Sunrise Bank 999,588 59,213,551 60,213,139 1,042,534 68,815,327 69,857,861 9,644,722 21 16.02%